Imidlalo Diablo III abalandeli Ekwenza Umlingiswa imidlalo sengilinde ngokulangazela okukhulu. Lokhu akusona isimanga, ngoba izingxenye ezimbili zokuqala steel empeleni cult. Nokho, umphumela wayengeyona indlela konke kuye elinde. Ingxenye yesithathu the wobuciko alizanga wobuciko, ke udumazeke kakhulu, futhi bedumazekile akuyona ipharamitha eyodwa. Gamers ungathandi nesitayela ezibukwayo, kanti futhi incane kakhulu ezingeni oyinkimbinkimbi ikhono ukuthenga izinto ezithile for imali yangempela. Ngaphezu kwalokho, bonke nje esazithukuthelisa isikhonkwane imidlalo ku-intanethi, ukuthi ayixhunyiwe inethiwekhi bese sihlola njalo uxhumano nje awukwazi ukudlala. Ukuhluleka Diablo III abalandeli uhlobo ophoqelelwe ukufuna induduzo nezinye imidlalo efana nale, kodwa eyenziwa ezingeni eliphezulu. I intandokazi undoubted kulokhu kwaba torchlight II, idonse lukhulu futhi wazinika lokho wayengakwazi ukunikeza umdlalo Diablo III. Kodwa hhayi kuphela kule phrojekthi bekulokhu emakethe, futhi ukhangwa eziningi ukunakwa Endleleni umdlalo Exile, ukubuyekeza ukuthi ufunda ku. Kuyini le phrojekthi? Kungani kungcono kuhle ukuthi uyakwazi esikhundleni Diablo ongenakuqhathaniswa nalutho? Lokhu manje niyolazi uma batawakhela Endleleni umdlalo Exile. Uhlolojikelele bakutshele konke amaphuzu ezinkulu odinga ukukwazi futhi ufunde mayelana nezinzuzo ezinkulu nemibi lo mdlalo.
Ngakho, kufanele uqale lapho esimweni Endleleni Exile Ukubuyekeza? Ngokuvamile, indaba okungukuthi lapha isiko ezimnandi zakudala zika Diablo, ingaphezu ezingabalulekile. Uzithola ku izwekazi elikude, lapho kukhona izindimbane izilo nazo zonke izinhlobo zezinsimbi tayascheesya scary okubi okuhle ngendlela engakholeki. Wena sokulahlwa, ubani ukuba yenze lobu bugebengu wathunyelwa nezwekazi, lapho ngesakhiwo kancane kancane izipesheli sokubhubhisa lesi okubi lasendulo - ngempela, yilokho kuphela. Wena ngeke asithole esonta okukhulu, sakhiwo ekhelini, izingxabano phakathi izinhlamvu, nokunye. Ngaphezu kwalokho, lwendaba ngokoqobo bafa phakathi nalowo musho - futhi lokhu kungenziwa ashiwo engcupheni yomdlalo, uma kungekhona ukuthi isithembiso obala Ngabathuthukisi uhlela kancane kancane ukwakhiwa umdlalo, kokunezela kulo izenzo ezintsha kanye phansi ukudlula njengoba isibuyekezo. Ngakho kudingeka uqaphe Endleleni Exile - Ukubuyekeza abonisa ngokucacile ukuthi abathandi kwesakhiwo ezijulile futhi izenzakalo bakwazi kangcono ukuma sibukela, ngoba lapha wena cishe ukuthola into efanayo. Ingqikithi yalo mdlalo alikho indaba.
Labo gamers ngubani abathandanga lesithathu "Diablo" ngenxa yokuthi ke sidinga uxhumano njalo ku-intanethi, ezingenzeka ngokuzumayo ayeke futhi wince at the emehlweni Endleleni Exile. Ukubuyekezwa kwe umdlalo wafika iphuzu lapho udinga ukucacisa ukuthi le phrojekthi futhi sidinga uxhumano njalo kwiseva. Nokho, kulesi simo, futhi kuba, ngokungafani icala nge Diablo III, lapho uxhumano lwe-inthanethi okudingekayo kuphela ngesizathu onjiniyela wafuna. Lapha, lokhu kungenxa yokuthi Endleleni Exile is a full umdlalo yabadlali abaningi. Esikhathini isiko ezimnandi zakudala zika Diablo II, ungakwazi umshungu nabangane bakhe futhi uhambo ndawonye - emhlabeni umdlalo ifakwe ngendlela yokuthi kukhona izindawo lapho ungakwazi ukuhlangabezana abasebenzisi, ukuhweba, nobudlelwano futhi ujoyine eqenjini, okwathi ngemva kwalokho ithunyelwa esiyingqayizivele izindawo azitholakali kwezinye abadlali, kodwa wena neqembu lakho, lapho yayibambene khona ngezihluthu ezenzeka. Ngakho ungakwazi ngokuphepha ukudlala nabangani bakho - ukudlala nabantu ongabazi zingenza, kodwa hhayi Kunconywa, njengoba umdlalo senziwa hhayi ngendlela efaneleke kakhulu lokhu. Ukuze ezingeni elisha emgodini noma emhumeni ingahambi lonke nangabantu ngabanye, ukuze wena kokubanga ukuze ngifinyelele kuleli ongamazi ngokushesha ukuhlanza indlela eya emhumeni, ukubhubhisa konke endleleni yayo futhi ukuqoqa wonke umcebo, enishiyela nge lutho. Ngakho udlala kangcono Endleleni Exile noma ngabe eyedwa noma inkampani wabangani abathembekile. Ikakhulukazi uyajabula ukuthi kukhona Endleleni Exile ngesiRashiya - ekuhlaziyeni Yiqiniso, lokhu akushintshi, njengoba ukuhunyushwa akuphazamisi izinga lo mdlalo.
Endabeni Endleleni Exile Ukubuyekeza amakilasi wedwa angaqondakali, futhi manje uzoqonda ukuthi kungani. Iqiniso lokuthi, ngokungafani kakhulu imidlalo Ekwenza Umlingiswa, lapho ikilasi ngalinye isihlahla ayo kwamakhono Onjiniyela yephrojekthi kuhambile ngendlela ehluke ngokuphelele. Baye wadala umuthi owodwa vo ukuthuthukiswa jikelele, okuyinto efanelekayo wonke amakilasi ayisithupha - konke kuwo ezingaphezu kwenkulungwane amakhono namakhono angefani, futhi umehluko phakathi amakilasi kuyinto ngempela ezingabalulekile. It itholakala lokuthi ukuthi kufanele uqale ukuthuthukiswa uhlamvu lwakhe, kusukela emikhawulweni yalo muthi oluhambisana isigaba oyikhethile. Nokho, uma ukhetha uyathakatha, kodwa ufuna ingalo ngayo inkemba ezimbili ngilambatha futhi Wagqoka zempi osindayo neqhawe, akukho lutho ukuyekisa - nje kufanele wafohla obukhulu lamanye emakhono kulabo ehambelana izifiso zakho. Yiqiniso, kungase kube inkinga ukuthi une ukuvula namakhono adingekayo ukuze kusebenze ezingadingekile ngokuphelele, kodwa lokho kumane nje isikhubekiso endleleni, ngokuvamile, kule game, konke kungenzeka.
Lokhu kungefani amakhono umuthi omncane liqhakaze yokuthi ukukhanya lokulwa lapha ngokucacile kunabayeni kokubili lwesithathu futhi engxenyeni yesibili ka "Diablo" - nabaphikisi nje ulahlekelwe impilo imivimbo yakho, bese kuwele phansi. Ayikho emifuleni kwegazi, akukho rebounds, bechitha umlotha nokunye - umbukwane kunalokho edabukisayo inxephezelwa for ezihlukahlukene indlela wezindlela. Ngo Endleleni Ukudingisa: sokudlondlobala (ukubuyekeza ugxila kuphela original umdlalo) ungeze amakhono ngaphezulu kokubili yekwentiwa. Phela, kwaba ephakeme amakhono yokwenziwa kuphela - sekuyisikhathi ukhulume futhi esebenzayo.
amakhono Active yamjabulisa ngempela, njengoba sixoxe ngayo ngokugcwele ukuchaza ukuthi iphetheni Endleleni Exile. Bezrybe (Ingxenye 3 "Diablo" okwakufanele zinakekelwe, ukuze abalandeli RPG kwenzeka bezrybe ngempela) owawuzovumelana futhi uhlelo banal kakhulu, kodwa le phrojekthi amlungiselele okuthile okukhethekile abadlali. Ngakho, bonke amakhono asebenzayo, okungukuthi, iziphonso, izicupho, buffs, ukwelashwa kanye nokunye, amagugu ukuthi ungakwazi ukufaka ku izinto zakho. Kulokhu, phawula ukuthi itshe ngalinye kumele ifane umbala iseli etholakala into. Futhi ungakhohlwa ukuthi une amakhono e iphaneli abaphuma njalo seliphindeke izikhathi Slots eziyisishiyagalombili kuphela, ngakho-ke kunengqondo ukwaba amatshe etholakalayo. Ngaphezu kwalokho, ungakhohlwa mayelana anezele ekhethekile amakhono akho - yokuthi ngamunye amatshe ungakwazi unamathisele "Runes" ezimbili, ngayinye yaba lishintsha ukupela yakho. Inhlanganisela kungenzeka ekwenzekeni kwento engenakwenzeka kakhulu - kwaze kwaba yilapho fireballs, okuyinto zihlukaniswe izingcezu amathathu kubangele umonakalo abandayo ezengeziwe. Amathuba akupheli, futhi okuyinto kanzulu esimweni Endleleni Exile isibuyekezo. Izici uhlamvu yakho uncike ngokuphelele phezu kwakho, ulahlekelwa kakhulu, uma kungekhona oprobuete kubo.
Kulindeleke ukuthi ngo-RPG uhlobo zonke izindawo ngezikhathi elakhiwe - linje, uhlelo ukhiqiza liyakhanga kakhulu izindawo iso ozithandayo ukuhlola futhi ngempela-non-isidina. Kuyiqiniso kukhona ethile, okuyinto sivezwe kula kwencazelo "amapayipi ukwehluleka" - ngezinye izikhathi algorithm kudala indawo enjalo, okuyinto cishe kungenakwenzeka ukuba kudlule. Letigaba letibalulekile teluhlelo yayo ecashile kakhulu ukuthi kufanele uchithe isikhathi esiningi ukucinga kubo. Ngokuphathelene izindawo eyayihlala abaphathi, kanye izindawo bahlalaphi futhi ukuhlangabezana NPC namaqhawe - abayikho static futhi ezingaphezu kuka-ezikhangayo.
Uma umdlalo Ekwenza Umlingiswa, wena uyobe cishe ngokushesha ukucabanga igolide njengoba yendawo - noma mayelana zemali zegolide, ababizwa ezinye zamudrenym fantasy izwi, kodwa ziyefana igolide. Kodwa hhayi esimweni Endleleni Exile, ngoba kule game, izenzakalo zenzeke kuleli zwekazi, okuyinto esihogweni emhlabeni, ijele okuphuzisa ikamu okubi abadingisiwe nokunye. Lapha, negolide, akekho ukucabanga, kodwa ungaba ezihlukahlukene amatshe, nezimagqabhagqabha nezindawo, futhi ungakwazi bayakhohlwa abahwebi - banayo awuzithengi lutho abaphendula ngokunengqondo. Ngokuvamile, yendawo isetshenziselwa ukuhweba nabanye abadlali, kodwa namanje indlela engcono kakhulu isicelo - ukwenza ngcono izinto ezikhona.
Yebo, wena wezwa ilungelo - asetshenziselwa amatshe yokuthuthukisa nemingcele izikhali, nezimagqabhagqabha - ukwandisa ukubaluleka zempi. Kufanele kuqashelwe ukuthi aqukethe incazelo eqondile kuzokwenzekani ngokuhamba ngcono. Lokhu kuhle, kodwa akusho ukunikeza umfutho onamandla. ezithakazelisayo Okuningi izindawo - bakwazi ukunikeza isihloko sakho a izimfanelo ambalwa ngaphezu kokuvamile, futhi Ungakwazi ukukhansela ngaphambi zonke izinzuzo atholakalayo. Ubungozi noma cha - okukhethayo.
Ngakho, sekuyisikhathi ukuthatha isitokwe lokho wathola Endleleni umdlalo Exile isibuyekezo. Izinzuzo Project ukuze kubhekwe kwasekuqaleni, zinjalo pretty umxhwele. Ngokuyinhloko kuyafaneleka i esigayegayeni engavamile, okuyinto ezingavamile ukuthola i RPG - iningi lala imidlalo kukhanye imibala, ngisho noma kuba okubi jikelele, liyobhujiswa e inqwaba Sparks. Lapha konke grey futhi zomile, ukuthi ayenzi umdlalo badabuka kakhulu - ke kuba asemkhathini kakhudlwana futhi eyingqayizivele. Elinye iphuzu kuwufanele ukunaka - kuyinto uhlelo lwentuthuko amakhono kokubili yekwentiwa. Indlela ezithakazelisayo ematsheni kupela kanye nje umuthi giant amakhono yokwenziwa - lena gqamisa eyinhloko iphrojekthi. Futhi ngokwehlukana kuwufanele kokusho ukuthi lo mdlalo shareware, okusho ungalanda mahhala nokudlala futhi abakhokhelwa kuphela ezinye izakhi, ngaphandle okuyinto kungenzeka ukwenza. Futhi uma iningi imidlalo ngenxa lezi zinto, abadlali abaningi kakhulu ukunqoba labo ungafuni imali yangempela emhlabeni ikhompyutha ke esimweni Endleleni Exile imali ungakwazi kuphela ukuthenga ezihlukahlukene umhlobiso yobuhle.
Nokho, uma kubhekwa amaphutha wedwa luyobe lungaphelele esimweni Endleleni Exile isibuyekezo. Ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo kufanele kubhekwe ku-balance sheet ukuze yakha umbono ocacile ngokuthi lo mdlalo. Ngakho-ke, kumelwe sibheke nemibi, futhi ebaluleke kakhulu phakathi kwazo ohlelweni ukulwa. Kuyinto yisicefe futhi ubukeka shabby kakhulu. Kungaba asebezithethelelwe uma umdlalo akazange afake isicelo sakhe RPG uhlobo, okungukuthi, wonke Gameplay ayakhelwe emhlabeni uhlelo ukulwa. Kukhona Yini embi ngalo kuthiwa wenziwa ngempela indaba impikiswano egcina ngokuzumayo, kodwa akucaci ukuthi uzokuya noma cha, kanye nokwethulwa PvP uhlelo, okungukuthi "umdlali vs. isidlali", okuyinto zimbi zedlula uhlelo impi yenqubo umdlalo. I Onjiniyela ukukuqinisekisa ukuthi kuzokwenziwa ngcono, kodwa okwamanje yobukhona bakhe esikhathini nakakhulu umdlalo.
Yekuchumana sendlela ukwenza apula egolide "Maynkraft"